AdraInformatica - Teknolojiyad, Qalab, Software, Hagayaal & Barnaamijyo
Teknolojiyada, qalabka kombiyuutarka, softiweer, tilmaamaha & barnaamijyada
Tomato comentario un
La dhejiyay Ogosto 23, 2021
Tilmaamaha ciyaarta fiidiyaha Bayonetta 3
Bayonetta 3 waa qeybtii seddexaad, oo ay barnaamij iyo horumarin ka sameysay PlatinumGames, oo ka mid ah khayaanada caanka ah iyo sash slash oo uu jilayo saaxirkii caanka ahaa. Ciyaarta fiidiyaha waxaa loogu talagalay si gaar ah Nintendo Switch, Nintendo console.
Ciyaarta fiidiyaha oo aad loogu taliyay dhammaan taageerayaasha ciyaarta waa Bayonetta 3. Ciyaartan fiidiyaha ah markasta oo ay ka dhex barto dadka raacsan iyo kuwa go'aansada inay tijaabiyaan. Waxaana la wada ogyahay in ciyaarista ciyaarta Bayonetta 3 ay tahay wax cajiib ah.
Tilmaan -bixiyaha soo socda waxaad ka heli doontaa macluumaad kaas oo aad ku bilaabi doonto ku ciyaarista Bayonetta 3 aad ayay kuugu fududaan doontaa. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay talooyin si aad u bilowdo ciyaarta ciyaarta adiga oo aan noqon qoolley ka soo dhacday buulkii, maxaa yeelay in kasta oo laga yaabo inaadan khabiir noqon, ugu yaraan waxaad baran doontaa aasaaska.
Goorma ayey tahay ciyaarta koowaad?
Mid ka mid ah taariikhaha aadka loo sugayo ee loogu talagalay taageerayaasha Bayonetta 3 es Taariikhda lagu sii daynayo, waqtigaan ciyaarta fiidiyowga waa la sii deyn doonaa waxaana laga heli doonaa qalabka-la heli karo. Mid ka mid ah waxyaabaha aadka loo doonayo ayaa ah in la ogaado dhammaan fursadahaas ay soo bandhigi doonto iyo wararka ay la yaabi doonto dadweynaha soo socda.
Talooyin si aad uga dhex muuqato Bayonetta 3
Marka waa ku habboon tahay in la bilaabo xusidda tabaha kuu anfacaya, waqtiga Bayonetta 3 ay gacantaada ku jirto, waxaad helaysaa ciyaaro leh natiijooyin aad u wanaagsan. Kuwani waa qaar.
Khibrad hel oo kor u qaad heerkaaga: Hagaajinta iyo istaagga ayaa ku siin doona fursado dheeraad ah waxaadna ka faa'iidaysan doontaa ciyaartoyga intiisa kale. Sidan ayaad kor ugu kici doontaa oo aad u wanaajin doontaa suurtagalnimada dabeecaddaada, iyo sidoo kale xirfadahaaga.
Soo ogow Bayonetta 3 waxay leedahay: Ma jiri doono hub ka fiican xog. Maskaxda ku hay kuwaas oo ah qalabka ciyaarta fiidiyaha kuu dhigaya si aad uga gudubto caqabadaha ayaa lagama maarmaan u ah xallinta dhibaatooyinka sida ugu dhakhsaha badan
Fuliyaan xeelado cusub: Xitaa haddii aad mid dhistay istaraatijiyad taas oo aad ku qanacsan tahay, ha joojin tijaabinta waxyaabo cusub, maadaama ay ku siinayso suurtagalnimada inaad ogaato farsamooyin waxtar leh oo kaa caawin doona hagaajinta.
Habee kontaroolada iyo dejinta: Beddel fiiqnaanta, kontaroolada iyo dhammaan dejimaha aad sameyn karto si ay ciyaarta kuugu fududaato. Kordhinta kontaroolada waxay kuu oggolaaneysaa inaad ciyaarta la qabsato baahiyahaaga si natiijooyinkaagu u fiicnaadaan.
Aaladaha aad ku tijaabin karto Bayonetta 3
Nasiib wanaag, ciyaarta fiidiyowga waxaa lagu ciyaari karaa kombiyuutarro kala duwan iyo kombuyuutarkaMarkaa ma jirto marmarsiiyo lagu joojinayo tijaabinta nooca la sii dayn doono. Qaar ka mid ah beddellada loo diyaarin doono inay ku ciyaaraan konsole ayaa noqon doona PlayStation y Xbox, kaas oo aad fursad ugu heli doontid La ciyaar ciyaartoy kale khadka tooska ah ama ciyaaro gudaha haddii aad doorbideyso.
Si la mid ah ayaa loo heli doonaa daruurta ku dhex ciyaar iyada oo loo marayo aaladaha sida Steam iyo Stadia ee PC -ga. Iyaga oo adeegsanaya uma baahnid inaad haysato qalabkii ugu dambeeyay ee suuqa ama kombiyuutar leh astaamo gaar ah kulan super xiiso leh.
Waxa abuurayaashiisu raadinayaan ayaa ah in dad badan intii suurtogal ah ay marin u heli karaan Bayonetta 3. Sidaas waxaa lagu sii deyn doonaa noocyo kala duwan Iyada oo la ciyaarayo waxay noqon doontaa mid fudud oo xiiso leh, waxay kuxirantahay dhadhankaaga.
Hadda haddii aadan iibsan karin dhammaan noocyada aad rabto oo halkii aad u baahan tahay inaad ku go'aansato mid keliya, ha welwelin, dhammaan noocyada waxay leeyihiin madadaalo weyn waxayna dammaanad qaadayaan inaad ku raaxaysan doonto ciyaaro gaar ah shaqsi ahaan iyo koox ahaanba.
Ma ku haminaysaa inaad hesho Bayonetta 3? Waa kuwan beddelkaaga
Haddii aad rabto waa hel bayonetta 3, waxaad si fudud ugu baahan tahay inaad booqato dukaanka jecel, meesha aad mar walba tagto. Ka dib markii taariikhda siideynta ay timaaddo, waxaad ka heli kartaa dhammaan konsollada la heli karo qiimo la awoodi karo.
Tani waa caadi in ka badan wax kasta oo leh ciyaaraha loogu talagalay kombiyuutarrada sida PlayStation, ama Xbox; consoles -ka kaas oo ciyaartooydoodu dareemaan xasilooni oo ay ku raaxaystaan ​​lahaanshaha nooca asalka ah ee ciyaaraha.
Beddel kale, haddii ay dhacdo inaadan rabin inaad ka baxdo gurigaaga, waa adeegsiga internetka. Waad ku dhex mari kartaa iyaga dukaamada ciyaarta fiidiyowga ee internetka, ama sidoo kale gudaha dhufto ee internetka, qaab fudud oo dammaanad leh.
Si dukaamadan internetka ka adeego, waxaad badbaadinaysaa waqti iyo dadaal amarkuna wuxuu imaan doonaa albaabka gurigaaga, ama waxaad sidoo kale codsan kartaa nooc la taaban karo, soo dejisan oo ku rakib qalabkaaga.
Laakiin sidoo kale aaladaha sida Stadia ama Steam, ayaa kuu oggolaanaya inaad ku raaxaysato ka dib bixinta lacag bixinta, adoo adeegsanaya server -kooda, taas oo macnaheedu yahay inaad ciyaari karto ilaa intaad ku xiran tahay internetka oo aad ka hoos qoran tahay.
Kireynta adeeggan macnaheedu waa, muddada gaaban, a outlay ka yar intii aad iibsan lahayd ciyaar asal ah, oo lagu daray waxay kuu oggolaaneysaa inaad ciyaarto ciyaaro badan oo kala duwan waqti xaddidan.
Baro sida loo ciyaaro Bayonetta 3
Ma jiro wax ka hubsan hadalkaas Tababarku wuxuu sameeyaa sayid, iyo sida ugu wanaagsan ee aad ugu fiicnaan karto wax waa inaad ku dhaqanto. Markasta oo aad shaqo qabato, waxaad noqonaysaa khabiir.
Isla sidaas ayaa ku dhacda ciyaaraha. Inta aad ruug -caddaa badan tahay, ayaa jawaabtaadu sii badnaan doontaa iyo maskaxdaada yeelan doonaan awood ay ku dhisaan xeelado aad u adag. Marka haddii waxa aad raadineyso ay tahay Baro sida loo ciyaaro Bayonetta 3 Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad is dejiso oo aad si joogto ah u tababarto.
Si aad u noqoto kan ugu fiican waa inaad sidoo kale cadawgaaga la kulan. Qaabka dhaqdhaqaaqyadooda, xeeladaha iyo farsamooyinkooda. Si aad u fahanto waxaad u baahan doontaa inaad si taxaddar leh u falanqayso. Iyagu waa waxyaalaha waxtar kuu yeelan doona inaad ka adkaato. Waxaad awoodi doontaa inaad ogaato waxa ay ku fiican yihiin iyo meelaha ay ku liitaan. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay ogow dhaqanka kuwa kaa soo horjeeda. Hadday yihiin NPCs ama ciyaartoy dhab ah, dhammaantood waxay adeegsadaan xirfado iyo xeelado kuwaas oo, haddii aad taqaanid, aad ku ogaan karto sida ugu fudud ee loo tirtiri karo loona noqon karo kan ugu fiican.
Haddii aad si fiican u falan -qayn karto, waxaad ka heli kartaa daciifnimadooda waxaadna ogaan doontaa sida looga faa’iidaysto khaladaadkooda. Ogaanshaha qofka kaa soo horjeeda ayaa ku siinaya faa'ido isaga ka sarreysa.
Laakiin sug, su'aashu kuma eka qofka kaa soo horjeeda. Waxaad gaadhi doontaa heer aad aad u xoog badan tahay, oo aad naftaada ka dhigi doonto cadow kuu gaar ah, si wanaagsan. Ka fakar xeeladahaaga gaarka ah oo wuxuu u shaqeeyaa inuu ka fiicnaado maalin kasta. Marwalba waad fiicnaan kartaa.
Waqtiga ay ku jirto waxaad baraneysaa tartamayaasha kale waxaad ka heli kartaa xooggooda iyo daciifnimadooda. Waxa ugu fiican ee aad samayn karto waa inaad qaadataa wax kasta oo ku caawinaya, khasab ma aha in samaynta xeeladoodii si isku mid ah, laakiin waa inaad wax ka barato oo aad ku darto qaabkaaga.
Ugu dambayntii, samee xeelado, si deggan u ciyaar, mar walbana si daahfuran u ciyaar. Kuwani waa dhismayaasha ugu waaweyn si ay u noqdaan ciyaartoyga Bayonetta 3 ugu fiican. Raac talooyinkan waxaadna ku sii dhowaan doontaa oo aad ku sii dhowaan doontaa xiddig noqo.
Dhagsii si aad ula wadaagto barta Twitter (Wuxuu ka furmayaa daaqad cusub)
Guji si aad ula wadaagto Facebook (Wuxuu furmayaa daaqad cusub)
Guji si aad ula wadaagto LinkedIn (Wuxuu furmayaa daaqad cusub)
Guji si aad ula wadaagto Pinterest (Wuxuu furmayaa daaqad cusub)
Dhagsii si aad ula wadaagto WhatsApp (Wuxuu ka furmayaa daaqad cusub)
Dhagsii si aad ula wadaagto Tumblr (Wuxuu furmayaa daaqad cusub)
Dhagsii si aad ugula wadaagto jeebka (Wuxuu ka furmayaa daaqad cusub)
La dhejiyay Ogosto 13, 2021
Dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u bilowdo ciyaarista Elden Ring
Elden Ring waa mid ka mid ah cayaarahaas wuxuu kudarsanayaa taageerayaal badan. Qaabkeeda xiisaha leh ee horumarinta iyo ku lug lahaanshaha ciyaaryahanka ayaa sabab u ah in kuwa raacsan ay aakhirka noqdaan kuwo daacad ah iyo in kuwa aan weli ku raaxaysan ay rabaan inay ciyaaraan.
Kuwa bilaabaya inay ku tijaabiyaan Giraanta Elden, waxaan u soo bandhignaa tusahan dhammaystiran oo leh talooyin aad waxtar u leh. Macluumaadkan waxaad ku heli kartaa aragti cad oo ah waxa ay tahay inaad samayso si aad u bilawdo ciyaarta adigoon si buuxda u jahwareersanayn.
Taariikhda sii deynta ciyaarta
Kuwa raacsan Elden Ring Waa inay durbaba u diyaar garoobaan bilowga ciyaarta inay dhacdo goor dhow Taariikhda lagu sii daynayo, oo ay ka ciyaari karaan qalabka-la heli karo. Fursadaha ciyaarta fiidiyaha oo aad u fiican, imaatinka ciyaarta fiidiyaha ayaa la xiiseynayaa si loogu raaxeysto dhammaan waxyaabaha cusub ee ay la imaan doonto.
Talooyin ku saabsan sidii aad uga soo muuqan lahayd Giraanta Elden
Sidoo kale way taabataa, bilaw inaad xasuusato talooyin ku caawiya, waqtiga Elden Ring uu gacantaada ku jiro, waxaad ku heli kartaa ciyaaro waxqabad fiican. Qaar baan kuu haynaa.
Khibrad hel oo heer dhig: Horumarka iyo horumarku wuxuu ku siin doonaa fursado badan waxaadna ka faa'iidaysan doontaa inta kale ee ciyaartoyga. Sidan ayaad kor ugu kici doontaa oo u hagaajin doontaa fursadaha dabeecaddaada, marka lagu daro xirfadahaaga.
Soo ogow waxa uu leeyahay Elden Ring: Ma jiri doono hub ka fiican xog. Maskaxda ku hay waxa ay yihiin qalabka ciyaarta fiidiyowgu kuu diyaarinayso si aad uga gudubto caqabadaha waa lama huraan in si dhakhso leh loo xaliyo dhibaatooyinka
La kulan siyaabo kala duwan oo loo ciyaaro: Mararka qaarkood a habka loo ciyaaro Way noo shaqaysaa, laakiin adiga oo isku dayaya ikhtiyaarrada cusub waxaad haysataa fursad fiican oo aad ku hesho siyaabo aad ku hagaajiso oo aad ku gaadho yoolka xirfad aad u weyn.
Samee dejinta aad u baahan tahay: Isbeddellada aad ku samayn karto goobaha ciyaarta ayaa kaa caawin kara inaad si fudud ula jaanqaaddo markaad ciyaarta ciyaareyso. Isbeddellada qaarkood oo aad samayn karto ayaa laga yaabaa inay ku lug leeyihiin shaashadda, codka, koontaroolada, ama wax kasta oo kuu oggolaanaya inaad si fiican u ciyaarto.
Qaabab noocee ah ayaad ugu ciyaari kartaa Elden Ring khadka tooska ah?
Nasiib wanaag, waxaad ku ciyaari kartaa ciyaarta consoles -yada kala duwan iyo kombiyuutarka, sidaa darteed ma jirto marmarsiiyo lagu joojiyo isku dayga nooca la sii deyn doono. Qaar ka mid ah beddellada laga heli doono inay ku raaxaystaan ​​konsole waa PlayStation y Xbox, taas oo ay suurtagal tahay la ciyaar inta kale ee khadka tooska ah ama ku ciyaar guriga dhexdiisa hadaad jeceshahay.
Ujeedada ugu weyn ee bilowno noocyo kala duwan waa in ciyaarta fiidiyowgu ay maamusho inay gaarto dhagaystayaasha ugu badan ee suurtogalka ah iyo in sidoo kale la wadaagga ciyaartoy kale ay tahay mid fudud oo madadaalo leh. Iyada oo ku xidhan dhadhankaaga, waxaad fursad u leedahay inaad doorato mid ka mid ah xulashooyinka ay bixiso Elden Ring.
Sidoo kale, dhammaan noocyada ayaa aad u qosol badan waxayna bixiyaan suurtagalnimada ku raaxee khibrad aad u fiican shaqsi ahaan iyo koox ahaanba.
Waad ku mahadsan tahay waddooyinkan waxaad heli kartaa Elden Ring
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso iibso Elden Ring waa inaad tagto dukaanka kuugu dhow aqalkaaga, ama kan aad had iyo jeer tagto. Ka dib taariikhda siideynta ciyaartaada, iyo maalmaha soo socda, waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto iyada oo laga heli karo dhammaan aaladaha ay leedahay.
Dhammaan ciyaartoy dhab ah, had iyo jeer way kafiican tahay in la helo nooca asalka ah ee ciyaaraha fiidiyowga. Habkan, waxay iskaashi la sameeyaan abuurista ciyaaro fiidyowyo badan waxayna taageeraan xayeysiisyada waaweyn.
Laakiin ma aha oo kaliya inaad ka heshid xarumo jireed, laakiin sidoo kale waxaad awoodi doontaa inaad ka iibsato dukaamada ciyaarta fiidiyowga ee internetka ama dhufto ee internetka kaas oo leh kaliya xisaab, waxaad awoodi doontaa inaad wax ka iibsato.
Si waxaad ka iibsataa dukaamadaan internetka, waxaad badbaadinaysaa waqti iyo dadaal amarkuna wuxuu gaari doonaa albaabkaaga, ama waxaad sidoo kale iibsan kartaa nooc la taaban karo, soo dejiso oo ku rakib qalabkaaga.
Marka lagu daro dukaamada ciyaarta fiidiyaha, waxaa jira ikhtiyaar ah in lagu ciyaaro iyada oo la shaqaaleysiinayo xirmada rukunka. Xaaladdan, ma iibsanaysid ciyaar lafteeda, laakiin waxaad xaq u leedahay inaad u isticmaasho cinwaanno aad u kala duwan muddo go'an. Tani waa kiiska Stadia ama Steam.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan barnaamijyadan waa qiimahooda. Bixi rukunka waa aad uga qaalisan intii aad iibsan lahayd ciyaarta fiidiyaha, oo lagu daray waxay kuu sahlaysaa inaad gasho cinwaano kala duwan.
Sidee looga weynaadaa giraanta 'Elden Ring'?
Dhammaanteen waxaan ku bilownaa sidii novice mar kasta oo aan la kulanno wax ka duwan, iyadoon loo eegin khibraddii hore ee aan ku leenahay meelaha kale, wax ka bilowga bilowga had iyo jeer waa khibrad cusub, laakiin ku naso, dadaalka waxaad noqon doontaa takhasusle.
Sidii aan hore idiinku sheegnay, waa inaad ku tababartaan wax kasta oo aad rajaynaysaan inaad u fulisaan si wanaagsan. Markan, ciyaaraha fiidiyowga. Markasta oo aad ku celcelisid, intii aad awoodo baro sirta Faraantiga Elden. Taasi markay sidaa tahay, haddii waxa aad raadineyso ay tahay noqo ciyaaryahanka ugu fiican Elden Ring, ka dib waxaan kugula talineynaa inaad bilowdo leylis, waxaad ku gaari doontaa dulqaad.
Si aad u noqoto kan ugu fiican sidoo kale waa inaad la kulan kuwa kaa soo horjeeda. Habka dhaqdhaqaaqyadooda, xeeladaha iyo xirfadaha. Tani waa inaad si taxaddar leh u falanqeeysaa. Waa tafaasiil yar oo aad u faa'iido badan si looga adkaado. Waxaad awoodi doontaa inaad ogaato faa'iidooyinka iyo daciifnimadiisa. Qabso waxa ku anfaca oo u isticmaal xumaanta. Haddii aad si hufan u samayso, si fudud ayaad uga saari kartaa. Hadday yihiin NPCs ama ciyaartoy dhab ah, dhammaantood waxay adeegsadaan xirfado iyo xeelado kuwaas oo, haddii aad taqaan, aad ku ogaan karto sida si fudud loogu garaaci karo oo aad uga soo bixi karto.
Markaad ogaato waxa hoos u dhaadhackiisu yahay, ku dhufo meesha ay ugu xanuun badan tahay oo garaac. In hal talaabo hore loo qaado mar walba waa faa'ido weyn.
Laakiin sug, arrintu kuma eka qofka kaa soo horjeeda. Waxaad u socotaa inaad gaadho heer aad aad u xoog badan tahay, oo aad u noqon doonto qof kaa soo horjeeda, hab wanaagsan. Baro tabtaada oo ku celceliya inaad ka fiicnaato maalin kasta. Had iyo jeer waad horumarin kartaa.
Intaa waxaa dheer in hel daciifnimada kuwa kula tartamaya, sidoo kale waxaad ogaan doontaa waxa ay ku fiican yihiin. Markaad u socoto sidii aad ugu fiicnaan lahayd waa inaad aqoonsataa waxa aad cabbayso munaasabad kasta. Markay sidaas tahay, ma xuma in la arko dhinacyada ay u shaqeeyaan ciyaartooyda kale oo loo waafajiyo qaabkaaga ciyaarta.
Ugu dambayntii, is -deji, ha ku boodin ficil waalan oo soo jeedin xeelad wanaagsan ayaa kuu fududayn doonta inaad ka jawaabto habka saxda ah, oo aad gaarto natiijooyinka ugu fiican. Haddii aad maamusho inaad raacdo tilmaamahan, waad noqon kartaa ugu fiican Elden Ring.
La dhejiyay Ogosto 5, 2021
Beyond Wanaag & Xun 2 Hagaha Ciyaarta
Mid ka mid ah ciyaaraha in ayaa helaya taageerayaal badan Iyo qaadashada xamaasad dheeri ah waa Beyond Good & Sharka 2. Ciyaartan waxay ku siinaysaa madadaalo iyo soo jiidasho leh si aad u fuliso ciyaaro aan laga adkaan karin, haddii aad cusub tahay ama aad hore u ciyaartay ciyaarta ka hor.
Hadda, macluumaadka aan ku soo bandhignay tilmaan -bixiyahan ayaa noqon kara mid aad waxtar u leh haddii aad bilowdo inaad ciyaarto Beyond Good & Evil 2 oo aad rabto inaad xoogaa faa iido ah hesho. Talada aan ku siin doonno hoosta, waxaa laga yaabaa inaadan noqon khabiir, laakiin si kastaba ha ahaatee, waxaad yeelan doontaa macluumaad aasaasi ah oo ku caawin doona
Goorma ayuu horudhaca Beyond Good & Shar 2?
Horey ayaa loo daabacay taariikhda sii deynta Beyond Good & Sharka 2 noqo Taariikhda lagu sii daynayo, laga bilaabo waqtigan, xertiisu ma caawin kari waayeen laakiin waxay ka walaacsan yihiin inay ogaadaan fursadaha cusub ee noocaani soo bandhigi doono ee lagu ciyaari karo qalabka-la heli karo.
Tabaha si aad uga dhex muuqato Beyond Good & Shar 2
Marka, way fiicnaan lahayd in la bilaabo xusidda talooyin ku caawiya, markaa marka Beyond Good & Evil 2 ay gacantaada ku jirto, Ku raaxayso ciyaaro leh natiijooyin aad u wanaagsan. Qaar baan kuu haynaa.
Ku sii wad layliska oo kor u qaad heerkaaga: Dhammaystirka xeeladahaaga iyo gaarista heerar sare ayaa si tartiib tartiib ah kaaga dhigi doona ciyaartoy wanaagsan. Intaa waxaa dheer, u dhaqaaqista ciyaarta waxay fureysaa aalado kaa caawin doona inaad gaarto yoolkaaga.
Soo ogow waxa Beyond Good & Evil 2 ay bixiso: Ma jiro hub ka faa’iido badan war. Maskaxda ku hay waxa ay yihiin qalabka ciyaarta fiidiyowgu kuu dhigayo si aad uga gudubto caqabadaha waa ku habboon tahay in si dhakhso leh looga jawaabo dhibaatooyinka
Ku dhaqan xeeladahaaga siyaabo kala duwan: Inbadan xeelado Inta badan ee aad tijaabiso, waxay u dhowdahay inaad hesho ama aad sameyso dhaqaaqyo kaa dhigi doona ciyaaryahanka ugu fiican.
Samee u gaar ahaansho kontaroolada iyo dejinta: Isku hagaaji qaraarka, kontaroolada iyo dhammaan dejimaha u oggolaanaya inay ciyaarta kuu fududeyso. Diyaarinta kontaroolada ayaa ku siineysa suurtagalnimada inaad ciyaarta ku xirto heerka raaxadaada si aad u gaarto natiijooyin wax ku ool ah inta lagu guda jiro cayaaraha.
Hababka aad ku tijaabin karto Beyond Good & Shar 2
Nooca cusub ee Beyond Good & Evil 2 wuxuu daboolayaa dhammaan dhadhaminta, haddii aad tahay taageere consoles ama aad doorbideyso PC, waxaad awoodi doontaa inaad isku daydo ciyaarta fiidiyowga qaabab kala duwan. Konsol ahaan, waad ka heli kartaa PlayStation, Xbox , kuwa kale, adiga oo ku siinaya fursad aad ku tijaabiso guriga ama ku xirmaan ciyaartoy kale khadka tooska ah.
Laakiin sidoo kale waad sameyn kartaa daruurta ku dhex ciyaar iyada oo loo marayo aaladaha sida Steam iyo Stadia ee kombiyuutarka. Kuwani waxaad ku samayn kartaa adiga oo aan lahayn console -kii ugu dambeeyay ee suuqa ama PC leh astaamo horumarsan ciyaaro ciyaar xiiso leh.
Ujeedada sii daayo noocyada kala duwan waa in ciyaarta ay gaarto dhagaystayaasha ugu badan ee suurtogalka ah iyo in la ciyaarista ciyaartoy kale ay tahay mid la heli karo oo xiiso leh. Iyada oo ku xidhan dhadhankaaga, waxaad fursad u leedahay inaad doorato mid ka mid ah xulashooyinka ay bixiso Beyond Good & Evil 2.
Hadda haddii aysan awoodin inaad hesho dhowr nooc sidaad jeceshahay oo ay tahay inaad ku go'aansato mid kaliya, ha xumaan, mid kasta oo ka mid ah noocyadu waxay leeyihiin madadaalo weyn waxayna dammaanad qaadayaan inaad noolaan doonto Kulamada aan laga adkaan karin shaqsi ahaan iyo ciyaartoy kaleba.
Xagee laga iibsadaa Beyond Good & Shar 2?
Waxa ugu horreeya ee aad sameyn kartid Keena Wanaag & Xun 2 waa inaad tagto dukaanka kuugu dhow gurigaaga, ama kan aad had iyo jeer tagto. Ka dib taariikhda siideynta ciyaartaada, iyo maalmaha soo socda, waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto inay ku habboon tahay dhammaan aaladaha ay leedahay.
Waa caadi maalmahan in taageerayaasha consoles -ka sida PlayStation, ama Xbox ay inta badan ku raaxaystaan ​​haysashada noocyada asalka ah ee dhammaan sii deynta.
Oo haddii aadan ku haysan dukaan ciyaarta fiidiyaha agagaarka, ha welwelin, waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa ciyaaraha fiidiyaha ee aad ugu jeceshahay dukaamada ciyaarta fiidiyowga ee internetka, ama gudaha dhufto ee internetka, haddii aad leedahay akoon aad iibsato.
Ka iibso dukaamada internetka Waxay la mid tahay iibsashada guriga, si ammaan ah oo raaxo leh. Intaa waxaa sii dheer, ikhtiyaarkan wuxuu u oggolaanayaa cinwaankaaga inuu yimaado albaabka gurigaaga ama, haddii aad rabto, waxaad dooran kartaa nooca dalwaddu, oo aad si toos ah ugu rakibto qalabkaaga.
Waxa kale oo jira adeegyo madal ciyaarta fiidiyaha rukunka ah. Goobahan waxaad ku ciyaari kartaa adoo adeegsanaya adeegayaasha madal, adoo adeegsanaya adeeg ku jira daruuraha. Tan waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad leedahay xiriir internet oo aad iska bixiso rukumada.
Kireynta adeeggan macnaheedu waa, muddada gaaban, a hoose outlay intii aad iibsan lahayd ciyaar fiidyow asalka ah, oo lagu daray waxay ka caawineysaa in la ciyaaro ciyaaro badan oo kala duwan waqti cayiman.
Tilmaamaha qaarkood si aad ugu fiicnaato Beyond Good & Shar 2
Ma jiraan wax ka run badan hadalka Tababarku wuxuu sameeyaa sayid, iyo sida ugu wanaagsan ee wax loo hagaajin karo waa in lagu dhaqmo. Markasta oo aad hawl qabato, ayay xirfaddaadu badataa.
Isla fikraddan ayaa sidoo kale lagu tiriyaa ciyaaraha fiidiyaha. Haddii aad rabto inaad noqoto macallin, waxaad u baahan tahay inaad ku tababarto. Tan, maskaxdaadu waxay la jaanqaadi doontaa amarrada iyo garaadka macmalka ah ee Beyond Good & Evil 2, abuurista qorshooyin iyo xeelado ka wanaagsan. Marka hadaad rabto macalin u noqo Beyond Good & Shar 2, ku bilow jimicsi.
Wax kale oo wax badan kaa caawin kara ayaa ah baro cadaawayaashaada habdhaqankooda. Qiyaasta dhaqdhaqaaqyada cadowga iyo falanqaynta xeeladihiisa ayaa kuu soo dhoweyn kara inaad ogaato daciifnimadooda. Waxaad awoodi doontaa inaad ogaato faa'iidooyinka iyo daciifnimadiisa. Waxaad kaloo u baahan tahay ogow sida loola dhaqmo cadaawayaashaada. Hadday yihiin NPCs ama ciyaartoy dhab ah, dhammaantood waxay adeegsadaan xirfado iyo xeelado, haddii aad barato, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato sida si fudud looga takhalusi karo oo aad ugu fiicnaan lahayd.
Markaad ogaato waxa daciifnimadiisu tahay, ku weerar meesha ay ugu xanuun badan tahay oo dil. Joogitaanka hal talaabo mar walba micnaheedu waa fursado fiican.
Sidoo kale, soo ogow cilladahaagu Waxay kaa caawin doontaa inaad xoojiso oo aad ku xoojiso, sidaa darteed sidoo kale dib u eeg xeeladahaaga oo ka gudub mar kasta oo aad fursad u hesho. Muhiim maaha haddii ay hore kuu caawiyeen, hubaal waad sii kori kartaa.
Del falanqaynta kuwa kaa soo horjeeda Waxaad ka heli doontaa laba nooc oo shay ah: kuwa ay si fiican u qabtaan iyo kuwa aysan aad ugu fiicnayn. Kuwii xumaa ee aan mar horeba faallo ka bixinay; ka faa'iidayso. Way wanaagsan tahay in wax laga barto kuwa wax wanaagsan sameeya. Kaliya maahan in la koobiyeeyo, waxaa ugu wanaagsan in lagu hagaajiyo istiraatiijiyadahaaga iyo habka aad u ciyaarto, si aad u sii wadato meesha aad si fiican wax ugu qabato.
Ugu dambayn, si degdeg ah ha u dhaqmin, si fiican u qorshee xeeladahaaga oo dejiso yoolal waqti-gaaban ah. Sidan ayaad si tartiib tartiib ah u gaari doontaa yoolalkaaga. Haddii aad raacdo talooyinkan, maalin kasta waxaad u dhowaan doontaa inaad ahaato ugu fiican Beyond Good & Sharka 2.
La dhejiyay Ogosto 2, 2021
Tusaha ciyaarta fiidiyaha ee Dead Island 2
Jasiiradda Dead Island 2 waa mid ka mid ah ciyaaraha fiidiyowga ayaa helaya taageerayaal badan. Qaabkeeda xiisaha leh ee furitaanka iyo ku lug lahaanshaha ciyaaryahanka ayaa u horseedaysa kuwa ciyaara inay daacad u noqdaan kuwa aan weli ciyaarin waxay rabaan inay tijaabiyaan.
Kuwa ku cusub Jasiiradda Dhimatay 2, waxaan u soo bandhignaa tusahan dhammaystiran oo ka kooban talooyin aad waxtar u leh. Macluumaadkan waxaad awoodi doontaa inaad yeelato fikrad ballaadhan oo ku saabsan waxa ay tahay inaad sameyso si aad u bilowdo ciyaarta adigoon gabi ahaanba lumin.
Waxay horeba u tahay dadweynaha xilligan la bilaabay Dead Island 2 noqo Taariikhda lagu sii daynayoTan iyo markii macluumaadkaan la bixiyay, kuwa raacsan ma aysan awoodin inay caawiyaan laakiin ku faraxsan inay ogaadaan fursadaha cusub ee noocaani keeni doono ee lagu raaxaysan karo qalabka-la heli karo.
Talooyin si aad uga dhex muuqato Jasiiradda Dhimatay 2
Waqtigaani waa waqtiga ugufiican ee aan qaarkood kugu xuso tabaha si aad ugu samaysato ciyaaro Jasiiradda Dhimatay 2 oo leh natiijooyin toganMarka marka ciyaarta la sii daayo waxaad isku arki doontaa hal talaabo oo hore. Kuwaan ayaa hoos ku taxan.
Kordhi khibradaada oo heer gaadh: Hagaajinta iyo kobcinta ayaa albaabada kuu furi doonta oo waxaad ka faa'iideysan doontaa inta kale ee ciyaartooyda. Sidan ayaad kor ugu kici doontaa oo aad u wanaajin doontaa suurtagalnimada dabeecaddaada, marka lagu daro xirfadahaaga.
Baro aaladaha aad ku isticmaali karto Jasiiradda Dhimatay 2: Wax kaa hormarin doona waa ogaanshaha aaladaha uu ciyaarta fiidiyowgu ku siinayo. Adiga oo garanaya sida iyo goorta aad u adeegsanayso waxa Dead Island 2 kuu diyaar ah, waxaad awood u yeelan doontaa inaad u isticmaasho waqti habboon si aad u gaarto yoolka
Isku day dhowr dariiqo oo aad ku ciyaarto: Mararka qaarkood a habka loo ciyaaro Way noo shaqeysaa, laakiin adoo tijaabinaya ikhtiyaarro cusub waxaad fursad fiican u leedahay inaad ogaato habab lagu horumariyo laguna gaaro himilada si fudud.
La qabsato dejinta aad jeceshahay: Lahaanshaha cayaaraha ay jaangooyooyinku ku siinayaan raaxo waxay ku siinaysaa suurtagalnimada inaad gaarto natiijooyin wanaagsan. Beddelidda shaashadda iyo dejimaha maqalka iyo dalbashada koontaroolada sida aad doorbidayso ayaa aad waxtar u leh.
Hababka aad ku ciyaari karto Dead Island 2
Ma jiri doono qof aan ka qaybqaadanayn, Jasiiradda Dhimatay 2 ayaa diyaar u ah kuwa doorbida consoles ama PC, samaynta labada qaabba waa la heli karaa. Waxaa ka mid ah consoles -ka siin doona suurtagalnimada ku raaxaysiga ciyaarta fiidiyaha waxaa ka mid ah PlayStation y Xbox, halka ay ciyaartoydu awoodaan ku ciyaar gudaha ama adoo ku xiraya ciyaartoy kale khadka tooska ah.
Laakiin sidoo kale waa la heli karaa daruurta ku dhex ciyaar iyada oo loo marayo bogagga sida Steam iyo Stadia ee kombuyuutarka. Iyaga oo la adeegsanayo, muhiim ma noqon doonto in la haysto qalabka ugu dambeeya ee suuqa ama kombiyuutar leh astaamo gaar ah ku raaxeyso ciyaaro aad u xiiso badan
Sidoo kale, waxaa jiri doonta fursad lagu daruurta ku dhex ciyaar, markaa uma baahnid inaad yeelato koox horumarsan oo tijaabisa Jasiiradda Dhimatay 2. On server -yada aaladaha sida Steam iyo Stadia, waxaad awoodi doontaa inaad ciyaaro ciyaar xiiso leh si dhakhso leh.
Dabcan, ujeedku waa in lagu farxo dhagaystayaasha ugu ballaaran ee suurtogalka ah. Tan awgeed waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan oo ah Jasiiradda Dhimatay 2 oo ka jawaabaya baahiyo badan, wax walba waxay ku xirnaan doonaan dookhyada uu qof walba leeyahay marka uu dooranayo ikhtiyaarka ugu habboon.
Mid kasta oo ka mid ah noocyada ayaa bixiya madadaalo aad u weyn, markaa ha ka welwelin haddii ay tahay inaad go'aan ka gaarto mid ka mid ah. Hayso waayo -aragnimo cajiib ah oo aad ku yeelan doonto suurtogalnimada inaad ku tijaabiso shaqsi ahaan iyo dad kaleba Waa amaan.
Iyada oo taas macnaheedu yahay waxaad ka iibsan kartaa Jasiiradda Dhimatay 2
para hel Jasiiradda Dhimatay 2 kaliya waa inaad aadaa dhanka Dukaanka ciyaarta taasi way ka dhowdahay ama u tag midka aad aad ugu kalsoon tahay. Furitaanka ka dib waxaad ka heli doontaa dhammaan qaababkeeda qiimo la heli karo.
Tani waa wax caadi ah inta badan dhammaantood ciyaaraha loogu talagalay kombiyuutarrada sida PlayStation, ama Xbox; consoles -ka oo adeegsadayaashu aad ugu qanacsan yihiin una jecel yihiin lahaanshaha nooca asalka ah ee ciyaaraha.
Laakiin dhismayaasha jirka ma aha ikhtiyaarka kaliya. Haddii aadan haysan meel u dhow, ama aadan rabin inaad ka baxdo gurigaaga, waxaad ka iibsan kartaa dukaamada internetkaama dhufto ee internetka.
Qodobka xoogan ee dukaamadaani waa taas waa inaadan gurigaaga ka bixin si aad wax u iibsato. Ciyaartu waxay ku timaadaa albaabkaaga albaabka, ama waad soo dejisan kartaa ka dib bixinta lacag bixinta isla markiiba rakib.
Laakiin sidoo kale aaladaha sida Stadia ama Steam, ayaa kuu oggolaanaya inaad ku raaxaysato ka dib markaad lacag bixiso, adoo adeegsanaya server -kooda, taas oo macnaheedu yahay inaad ciyaari karto mar kasta oo aad ku xiran tahay internetka oo aad ka hoos qoran tahay.
Adeegsiga adeeggan macnaheedu waa, muddada gaaban, a bixinta hoose halkii aad ka heli lahayd ciyaar fiidyow asalka ah, marka lagu daro taasi waxay ka caawineysaa in la isticmaalo cinwaano badan waqti cayiman.
Sidee ugu fiicnaan kartaa Jasiiradda Dhimatay 2?
Dhammaanteen waxaan bilownaa inaan noqonno kuwa cusub mar kasta oo aan la kulanno wax cusub, iyadoo aan loo eegin aqoontii hore ee aan ku leenahay meelaha kale, isku dayga wax ka soo xoqidda had iyo jeer waxay abuurtaa dareen ka duwan, laakiin deggenaan, shaqadaada waxaad ku noqotaa takhasusle.
Waxaa la mid ah ciyaaraha fiidiyaha. Khibrad badan oo aad yeelato, ayaa jawaabtaadu sii badnaan doontaa iyo maskaxdaada waxay leeyihiin awood ay ku dhisaan tabo wanaagsan. Marka haddii waxa aad rabto ay tahay baro sida loo ciyaaro Dead Island 2 waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa samir iyo jimicsi joogto ah.
Waxyaabaha kale ee hawshaada kuu fududayn kara ayaa ah falanqee xeeladaha cadaawayaashaada. Saadaalinta dhaqdhaqaaqyada cadowga iyo fahamka xeeladoodiina waxay kuugu dhowdahay inaad kala furfurto dhibcohooda daciifka ah. Waxaad awoodi doontaa inaad hesho waxa uu sameeyo sax iyo qalad. Waxaad kaloo u baahan tahay baro sida looga ciyaaro kuwa kaa soo horjeeda. Hadday yihiin NPCs ama ciyaartoy dhab ah, dhammaantood waxay adeegsadaan xirfado iyo xeelado, haddii aad taqaanid, waxaad ku ogaan kartaa sida si fudud looga adkaan karo oo aad ugu fiicnaan lahayd.
Adiga oo garanaya waxa cadowgu sameeyo iyo waxa uu qaldan yahay, waxaad isaga kaga faa'iideysan doontaa isaga. Waxay ku xirnaan doontaa waayo -aragnimadaada si aad u awooddo inaad ka faa'iidaysato faa'iidadaas si aad u guulaysato.
Sidoo kale, cadee daciifnimadaada Waxay kaa caawin doontaa inaad xoojiso oo aad ku xoojiso, sidaa darteed sidoo kale baro xeeladahaaga oo wanaaji mar kasta oo aad fursad u hesho. Macno malahan haddii ay hore kuugu adeegeen, hubaal waad hagaajin kartaa.
Del falanqaynta kuwa kaa soo horjeeda Waxaad ogaan doontaa laba shay: waxa ay ku fiican yihiin iyo waxa aysan ku fiicnayn. Kuwii xumaa ee aan mar hore isku muujinno; ka faa'iidayso. Waxyaabaha wanaagsan ayaa wanaagsan in la barto. Ma aha oo kaliya in la sameeyo sida ay tahay, waxa ugu habboon ayaa ah in la waafajiyo xeeladahaaga iyo habka aad u ciyaarto, si aad ugu sii waddo dhulka aad deggan tahay.
Ugu dambayn, ha u dhaqmin si waalan, ku dheg xeeladahaaga oo dejiso yoolal waqti-gaaban ah. Sidaas ayaad awood ugu yeelan doontaa inaad higsato waxoogaa yar. Haddii aad raacdo talooyinkan, waxaad u dhowaan doontaa ahaanshaha mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Jasiiradda Dhimatay 2.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u bilowdo inaad ku raaxaysato Beyond Good & Shar 2
Mid ka mid ah ciyaaraha fiidiyowga ee waxay noqoneysaa mid caan ah Oo qaadashadu aad u badan tahay Beyond Good & Evil 2. Ciyaartan fiidiyaha ahi waxay ku siinaysaa waayo -aragnimo xiiso leh oo soo jiidasho leh taas oo aad ku hormarin karto ciyaaro aan la bar -bar dhigi karin, haddii aad tahay qof bilaw ah ama horeba u ciyaaray ciyaarta.
Intaa waxaa dheer, macluumaadka ku jira tilmaan -bixiyahan wuxuu noqon karaa mid aad waxtar u leh haddii aad hadda ka bilaabanayso Beyond Good & Evil 2 oo aad rabto inaad yeelato faa iido gaar ah. Talooyinka aan hadda kuu hayno, ma noqon kartid khabiir, laakiin waxaad heli doontaa macluumaad aasaasi ah oo ku caawin doona
Taageerayaasha Beyond Good & Sharka 2 waxay u diyaar garoobayaan inay helaan ciyaarta ugu horreysa dhowaan Taariikhda lagu sii daynayo, oo aad ku raaxeysan karto qalabka-la heli karo. Iyada oo suurtagalnimada ciyaarta fiidiyaha ee cajiibka ah, imaanshaha ciyaarta fiidiyaha ayaa la filayaa inay ku raaxaysato dhammaan wararka ay keeni doonto.
Talooyin si aad uga dhex muuqato Beyond Good & Shar 2
Waxaa cad inay tahay fursada ugu fiican ee xoogaa wax lagu siiyo tabaha kuu fududaynaya inaad fuliso ciyaaro cajiib ah marka Beyond Good & Evil 2 ay farahaaga ku jirto. Qaarkood waa sida soo socota.
Kordhi khibradaada oo kor u qaad heerkaaga: Horumarinta iyo horumarku waxay ku siin doontaa fursado badan waxaadna yeelan doontaa faa iido la xiriirta ciyaartoyda inteeda kale. Sidan ayaad uga adkaan doontaa oo aad u wanaajin doontaa fursadaha dabeecaddaada, marka lagu daro xirfadahaaga.
Soo ogow waxa Beyond Good & Evil 2 ku siinayo: Haddii wax ku siiyaan faa iido, waa "ogaada". Markii la qeexay kuwa ah qalabka ciyaarta iyo sida loo isticmaali karo waa lagama maarmaan si looga gudbo caqabadaha laga yaabo inay ku jiraan ciyaarta
Isticmaal xeelado cusub: Xitaa haddii aad sameysay a istaraatijiyad Taas oo aad ku qanacsan tahay, had iyo jeer isku day waxyaabo cusub, maadaama ay ku siinayso suurtagalnimada inaad ku ogaato farsamooyin waxtar leh oo kuu oggolaan doona inaad horumariso.
Beddel goobaha aad u baahan tahay: Sameynta kala duwanaanshaha aad u baahan tahay goobaha ciyaarta fiidiyaha ayaa kaa caawin doonta inaad si fudud ula qabsato marka aad ciyaareyso. Mid ka mid ah dejinta wax ka beddelka ayaa laga yaabaa inay la xiriirto xallinta, maqalka, kontaroolada ama wax kasta oo kuu oggolaanaya inaad si fiican wax u qabato.
Aaladaha lagu dheeli doono Beyond Good & Shar 2
Nooca cusub ee Beyond Good & Evil 2 waxaa loogu talagalay qof walba, haddii aad tahay taageere consoles ama aad doorbideyso PC, ciyaarta waxaa lagu tijaabin karaa qaababka kala duwan. Konsol ahaan, waad ka heli kartaa PlayStation, Xbox iyo kuwa kale, iyagoo ku siinaya fursad aad iskudaydo guriga ama kula xiriir dadka kale khadka tooska ah.
Si la mid ah ayaa loo heli doonaa daruurta ku dhex ciyaar adoo isticmaalaya bogag sida Steam iyo Stadia kombiyuutarka. Kuwaas oo aan laga maarmi doonin in la helo konsolkii ugu dambeeyay ee suuqa ama kombiyuutar leh sifooyin gaar ah si ciyaaro baashaal
Waxa aad doorato waxay yeelan doontaa wax badan oo ku saabsan dookhyadaada iyo miisaaniyaddaada. Sidan ayaad awooddaa ka hel Beyond Good & Evil 2 qaabab kala duwan. Waxa la raadinayo ayaa ah in la gaaro dhagaystayaasha ugu badan ee suurtogalka ah oo aan ka dhigno ku raaxaysiga ciyaarta mid fudud iyo qof walba.
Sidoo kale, nooc kasta oo ka mid ah noocyadu waxay leeyihiin ikhtiyaarro madadaalo leh waxayna diyaariyaan suurtogalnimada ku raaxayso waayo-aragnimo aad u fiican oo si shaqsi ah ama koox-kooxeed ah.
Waxaan u baahanahay inaan iibsado Beyond Good & Shar 2, halkee baan aadi karaa?
Tallaabada koowaad ee bartaan Beyond Good & Shar 2 waa inaad booqato dukaanka kuugu dhow gurigaaga, ama kan aad mar walba tagto. Marka taariikhda sii -daynta ciyaartaadu ay timaaddo, maalmaha soo socdana, waxaad ka arki kartaa in laga heli karo dhammaan goobihiisa.
Waa kiiska ciyaaraha loogu talagalay kombiyuutarrada sida PlayStation, ama Xbox. Gaar ahaan, dhammaan taageerayaasha kuwaas oo abuuraya dareen wanaagsan iyagoo haysta hantidooda nooca asalka ah ee ciyaaraha aad ugu jeceshahay.
Si kastaba ha noqotee, kama heli doontid oo keliya dukaamada jirka, laakiin sidoo kale waad awoodi doontaa inaad gasho dukaamada ciyaarta fiidiyowga ee internetka ama dhufto ee internetka taas oo kaliya aad u baahan tahay inaad hal xisaab ku yeelato iibsiga.
Si waxaad ka iibsataa dukaamadaan internetka, waxaad keydisaa waqti iyo shaqo oo ciyaartaada ayaa gaari doonta gurigaaga, ama waxaad sidoo kale iibsan kartaa nooc muuqaal ah, soo dejisan oo ku rakib qalabkaaga.
Marka laga reebo dukaamada ciyaarta fiidiyaha, waxaa jira beddelkii lagu ciyaari lahaa xirmada rukunka. Xaaladdan, ma iibsanaysid ciyaar lafteeda, laakiin waxaad xaq u leedahay inaad ku raaxaysato ciyaaro badan oo kala duwan waqti cayiman. Tani waa kiiska Stadia ama Steam.
Adeegsiga adeeggan macnaheedu waa, muddada gaaban, a bixinta hoose halkii aad ka iibsan lahayd ciyaar fiidyow asalka ah, oo lagu daray waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku raaxaysato cinwaano badan waqti cayiman.
Sidee loo barto in lagu ciyaaro Beyond Good & Sharka 2?
Dhammaanteen waxaan ku bilownaa sidii novice mar kasta oo aan la kulanno wax cusub, iyadoon loo eegin waayo -aragnimadii hore ee aan ku leenahay dhinacyo kale, bilowga wax bilowga had iyo jeer waa waayo -aragnimo ka duwan, laakiin xasilloonow, ku dhaqanka waxaad noqon doontaa takhasusle.
Of Tababarku wuxuu sameeyaa sayid sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa ciyaaraha. Markasta oo aad ku celcelisid, si ka sii fiican ayaad ula qabsan doontaa xakamaynta Beyond Good & Evil 2 iyo jawaabaha AI. Markaa haddii aad damacdo noqo mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Beyond Good & Shar 2, naftaada ka buuxi dulqaad iyo rabitaan wanaagsan, oo ku dhaqan muddo dheer.
Wax kale oo ka caawiya kordhinta farsamooyinkaaga ayaa ah baro dadka kaa soo horjeeda. Waad ogaan kartaa waxa uu sameeyo sax iyo qaladba. Adiguba waad ubaahantahay baro sida loo ciyaaro kuwa kaa soo horjeeda. Hadday yihiin NPCs ama ciyaartoy dhab ah, dhammaantood waxay adeegsadaan dhaqdhaqaaqyo iyo xeelado kuwaas oo, haddii aad taqaanid, aad awoodi doonto inaad ogaato sida ugu fudud ee aad u garaaci karto oo aad ugu fiicnaan lahayd.
Markaad ogaato waxa daciifnimadiisu tahay, ku dhufo meesha ay ugu xanuun badan tahay oo ka adkaato. In hal talaabo hore loo qaado mar walba waa faa'ido weyn.
Sidaad u falanqaysay qofka kula tartamaya, waa inaad sidoo kale dib u eegis ku samee oo fahmaan farsamooyinkaaga iyo natiijooyinka ay ku siinayaan. Xitaa haddii aad wax weyn samaynayso, hubaal waad hagaajin kartaa mar uun. Falanqee xeeladahaaga maalinba maalinta ka dambeysa oo ogow meesha aad ku fiicnaan karto.
Intaa waxaa dheer in hel cadhada cadaawayaashaada, waxa kale oo aad ogaan doontaa waxa ay ku fiican yihiin. Raadintaada si aad u noqoto kan ugu fiican, waa inaad ogaataa waxa aad qabsan karto munaasabad kasta. Markay sidaas tahay, ma xumaan doonto inaad aragto waxa wax u tara dadka kale oo u qaabeeya habka aad u ciyaarto.
Ugu dambayn, si degdeg ah ha u dhaqmin, ku dheji xeeladahaaga oo dejiso yoolal waqti-gaaban ah. Sidan ayaad si tartiib tartiib ah u gaari doontaa yoolalkaaga. Haddii aad raacdo talooyinkan, waxaad u dhowaan doontaa ahaanshaha ugu fiican Beyond Good & Sharka 2.
Xuquuqda daabacaadda © 2021 · Dhammaan xuquuq dhowran · AdraInformatica
90-kii Retro Mawduucyada Organic · Akhriska RSS · gasho